सरकारी अस्पतालमा अनलाइनबाट ओपिडी टिकट « risingsunkhabar
प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:३१
चितवन । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने गुनासो आइरहेको समयमा यहाँको अस्पतालले अनलाइनबाटै ओपिडी टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको छ । टिकट लिन लामो समय पालो कुर्नुपर्र्ने झन्झटबाट छुटकारा दिन बकुलहर–रत्ननगर अस्पतालले अनलाइन टिकट सुरु गरेको हो ।
उहाँले अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरी अनलाइनबाट टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘हामी अस्पताललाई सबै किसिमले अब्बल बनाउँदै छौँ ।’
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विश्वबन्धु बगालेले अस्पतालको वेभसाइटमा गएर नाम, ठेगाना, उमेर, लिंग, सम्पर्क नं. लगायतको जानकारी भरेपछि टिकट जारी हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले बिमामार्फत काटिएको टिकटको भने प्रमाणित अस्पतालमा आएर गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।